Akụkọ - Ahịa Soybean Na-adịgide Bullish
Ahịa Soybean Na-anọgide na Bullish
N'ime ọnwa isii gara aga, Ngalaba Na-ahụ Maka Ọrụ Ugbo na United States na-aga n'ihu na-ewepụta akụkọ ọma kwa ọnwa kwa ọnwa na mkpesa kwa ọnwa na mkpesa maka ngwaahịa ugbo, na ahịa na-echegbu onwe ya banyere mmetụta nke La Nina na soybean mmepụta na Argentina, nke mere na soybean ọnụahịa na mba ndị ọzọ na-aga n'ihu na-enwe ọhụụ ọhụrụ na afọ ndị na-adịbeghị anya, nke na-akwadokwa ahịa soybean na China ruo n'ókè dị ukwuu. Ka ọ dị ugbu a, soybean nke ụlọ na Heilongjiang na ebe ndị ọzọ na China nọ na ọkwa ịgha mkpụrụ. N'ihi oke ọnụahịa nke ọka ụlọ na usoro nchịkwa dị mgbagwoju anya nke soybean, a ga-emetụta akụ nke soybeans ruo n'ókè ụfọdụ n'afọ a, na usoro uto nke soybean na-adịkarị mfe idei mmiri na ọdachi ọkọchị, ya mere ikuku bullish nke soybean ahịa ka dị mkpa.
Lezienụ anya nke na-eto eto n'oge ihu igwe
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ oge opupu ihe ubi na oge ịgha mkpụrụ na China, ihu igwe ga-enwe mmetụta dị ukwuu na ịgha mkpụrụ nke soya na mkpụrụ osisi ndị ọzọ. Karịsịa mgbe mkpụrụ osisi soybean pụta, mmiri ozuzo na-arụ ọrụ dị mkpa na uto ya, ya mere, a ga-enwe nkọwa banyere ọdachi ihu igwe na ahịa soybean kwa afọ. N'afọ gara aga, oge opupu ihe ubi nke China mechara bụrụ afọ ndị gara aga, na nsonaazụ mmiri ozuzo nke mmiri ozuzo na soybeans na-egbu oge oge ntozu nke soya bekee, nke mechara duga mbelata nke soya bekee, ma mechaa kwado ọnụ ahịa soybean ụlọ niile. gaa na ọkwa dị elu nke 6000 yuan / ton. N'oge na-adịbeghị anya, ihu igwe ikuku ugwu dị na mbara igwe mere ka nchegbu ahịa soybean na-echegbu onwe ya, mmepe nke ihu igwe na-esote nwere ike ịga n'ihu na-akpata ọnụ ahịa soybean.
Ọnụ ego ụlọ na-akwụ ụgwọ dị elu
Ruo ogologo oge, ego ịgha mkpụrụ nke soybean na mkpụrụ osisi ndị ọzọ na China adịghị elu, nke kachasị n'ihi na akwụ ụgwọ ihe ọkụkụ dị ka mgbazinye ala ga-ebili n'ọtụtụ buru ibu na ọnụ ahịa ihe ọkụkụ na-arị elu, na afọ ndị na-adịbeghị anya, ụgwọ ihe ọkụkụ nke mkpuru osisi, fatịlaịza, ọgwụ ahụhụ, ọrụ na ndị ọzọ abawanyela n'ọkwa dịgasị iche iche, afọ a bụkwa otu. N’etiti ha, ego ụlọ nke afọ a ka dịtụ elu karịa afọ gara aga, n’ozuzu na 7000-9000 yuan / hectare. Tụkwasị na nke ahụ, a na-achịkwa ọrịa COVID-19 n'ụzọ dị irè, ọnụahịa fatịlaịza, ọgwụ ahụhụ, mkpụrụ na ọrụ anọgidewo na-arị elu. N'ihi ya, ọnụ osisi a na-akụ nke soya bekee na Northeast China bụkarị 11,000-12,000 yuan / hectare n'afọ a.
Ego akuku soybe na akuku ugwo ulo gha enwe mmetuta site n’onu ugwo akuku, ya na ochicho nke ufodu ndi oru ugbo na iwegharia oka n’iru na ibili onu ahia oka n’enweghi ike igha ufodu ndi oru ugbo iresia agwa ole na ole soybean ha ruputara na ngwa ahia ugbua.